Jamalweyn oo Lagu xardhay Lafo Hawiye
Buluugleey, Tuesday, September 06, 2005
Nin ka soo jeedda goboladda isku magacaabay Puntland ee Soomaalidu u taqaano gobolka Bari oo uu dhawaan dharbaaxay Maxamed Dheere ahaana xoghaynta Cabdilahi Yusuf ayaa lagu tuhun sanyahay inuu ka dambeeyay xasuuqii loo geeystay 216 qof oo ka baxay Magaalooyinka Muqdisho, Sh/Dhexe, Sh/Hoose iyo Hiiraan kuwaas oo doonayay inay u tahriibaan dhinaca dalka Yemen si ay kaga sii gudbaan boqortooyadda
Sacuudi Carabiya. Dadkaan oo la baaray liiska magacyadooda ayaa waxay dhamaan ka soo wada jeedaan beelaha Hawiye.
Dadka ku sugan Muqdisho ayaa tilaabadaas ku tilmaamay mid argagixiso qabiil
ah waxayna xaqiijiyeen in falkaas uu ahaa mid ay wax ka ogaayeen madaxda sare ee
beesha degta gobolka Bari. Guddi gaara oo baaritaan iyo tirakoob ku sameeynayay dadkii lagu laayay badda ayaa waxay soo bandhigeen dhawaan diiwaan cadeynaya in seddexdii sano ee la soo dhaafay badda boosaaso lagu daadiyay 2247 qof oo u dhashay beelaha Hawiye kuwaas oo dhamaantood ku nafwaayay xeebaha Bari.
Doomaha Bari ka baxa ee tahriibayaasha ayaa had iyo jeer sameeya xasuuqa dhalinyaradda tahriibayaasha ee ka yimaada dhinaca koofurta. Jamalweyn oo ku yaal bartamaha badda Cas ayaa lagu dhejiyay boor lagu qoray LAFA HAWIYE taas oo loola jeedo inay tahay halka ay ku dhinteen tiradda ugu badan ee dhalinyarada ka soo jeeda beelaha hawiyaha.
Enj. Xuseen Maxamed Ceydiid ayaa tilaabadaas ku tilmaamay mid abuuri karta colaad sokeeye maadama dadka lagu laayay badda boosaaso ay yahiin kuwa ka soo jeedda goboladda koofurta Somaliya, wuxuuna ugu baaqay beesha degta gobolkaas oo uu maamulkeeda hogaaminayo Cadde inay maxkamad soo taagaan kooxdii falkaas geeysatay iyo milkileyaasha doonleyda oo leh dhaqanka maafiyada.
Salaad Cali Jeelle oo ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayna isku fikrad dhow yihiin Col. Cabdilahi Yusuf ayaa isaguna ku dhawaaqay in gudi gaara loo diri doono gobolka Bari si
ay u soo baaraan qaabka uu u dhacay falkaas. Waxeysa cid walba ogtahay in xaalkaas uu yahay mid dadka la maqashiinayo dhawaaq aan waxba laga qabaneyn.
Maafiyadda ka ugaarta gobolka Bari ayaa waxey caan ku tahay inay lacagaha ka dhacaan dhalinyaradda koofurta kadibna ku ridaan badda. Waxaa la tuhunsan yahay in Cabdirisaaq Xasan Cusmaan oo loo yaqaan Juriile uu ka mid yahay dadka doonyaha milkileyaasha ka ah.